Hetsipanoherana sy Filazana Fisianà Hosoka Taorian’ny Fifidianana Filohampirenena Tao Ekoatora · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Avrily 2017 12:51 GMT
Sainan'ny firenena Ekoatora. Sary an'i Yamil Salinas Martínez tao amin'ny Flickr. Ampiasaina miaraka amin'ny lisansa CC 2.0 .
Nandray anjara tamin'ny lahatsoratra amin'ny teny Espaniôla niaingàna i Daniela Gallardo. Ny dikanteny Anglisy eto ambany dia namboarina sy nasiana fanavaozana.
Taorian'ny fampielezankevitra mafonja nataon'ireo mpifaninana Guillermo Lasso sy Lenin Moreno, dia ity farany no nambara fa nivoaka nandresy tamin'ny fifidianana ho filohampirenena tao Ekoatora tamin'ny 2 Aprily. Kanefa, ny avy amin'ny fanoherana sy ireo mpomba an'i Lasso dia nilaza fisianà hosoka ary niantso fanaovana hetsipanoherana hitakiana ny famerenana fanisàna iray vaovao.
Ny isa ofisialy nomen'ny Filankevitra Nasionaly misahana ny Fifidianana dia 51.16% ho an'i Moreno ary 48.84% ho an'i Lasso.
Onjam-pihetsiketsehana goavana no hita nandritra ireo andro nanaraka ny fifidianana, voarakitra amin'ny tenifototra #Megafraude (Hosoka-Goavana) sy #LicenciadoMoreno (Moreno “Voahosotra”, anarana iray mahazatra ampiasaina ho an'ireo olona nahazo maripahaizana) mba hanipihana ny zavamisy hoe lavin'ny olona sasany ny hiantso azy ho “filoha-voafidy”:
Lisette Arévalo Gross sy Sol Borja, mpandalina avy amin'ny media Ekoatoriana GkillCity, no namaritra ny fomba fipetrak'ireo mpifaninana ao anatin'ny tontolo politika feno fifandirana ao Ekoatora, ary koa ny tahotra ananan'ireo Ekoatoriana marobe momba ny fahalalahana maneho hevitra sy ny fiarovana ny demaokrasia. Momba ireo nifidy an'i Lasso, dia hoy i Arévalo Gross :
Feno zavatra tsy nanjary tamin'ny androm-pifidianana. Fitarainana nitety ny media sosialy milaza ny momba ireo birao fifidianana, ary ireo fikambanana toy ny Usuarios Digitales (mpmpiasa ny dizitaly), izay manaraka ny fironan'ireo olompirenena ety anaty media an-tserasera, nampangaina ho nanao lalao maloto tamin'ny fizaràna torohay izay mety nampanahirana ireo mpifaninana akaikin'ny fitondràna.
Toy izay ihany, ireo filazàna fisianà hosoka dia mitanisa fiampangàna natao nandritra ny fifidianana tao Venezoela tamin'ny 2013 nifanandrinan'i Nicolás Maduro, filoha amperinasa amin'izao fotoana ao Venezoela, sy Henrique Capriles, izay mpifanandrina mivantana aminy:
Toy izay nataon-dry zareo tamin'i Capriles tany #Venezuela no ataon-dry zareo amin'i #GuillermoLasso ao Ekoatora. Tsy ekena ny HOSOKA! #LassoPresident
Nanambara i Lasso fa hitaky famerenana fanisàna vato izy ary hanaiky raha toa ka resy “na dia vato iray monja aza”.
Ambadika lavitr'ireo tsahotsaho fisianà hosoka na ny hevitra hoe antoko miha-mitombo hery, mitohy ny ahiahy sy ny fihenjanana ateraky ny kolikoly ary ny fameperana ny fahalalahana maneho hevitra.